Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सरकारको घोषणापछि विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने बढे – Emountain TV
काठमाडौँ, १४ चैत । पछिल्ला दिनमा आम नागरिकमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगप्रति आमजनताको आकर्षण बढेको छ ।
सरकारले बुधबार मात्रै विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पछिल्लो दिनमा मात्रै तीन हजार बढी विद्युतीय चुल्हो बिक्री गरेको छ ।
कम्पनीलाई सरकारले कूल सात हजार ३४० थान विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत चुल्हो बिक्री भएको खनालको भनाइ छ । पछिल्लो पटक सरकारले साताव्यापी लकडाउन घोषणा गरेको अवस्थामा पनि सरकारको निर्देशन प्राप्त भए मोबाइल भ्यानमार्फत पनि चुल्हो बिक्री गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।
लकडाउनपछि आमसर्वसाधारण चुल्हो खरिद गर्न नआएपछि सरकारी कर्मचारी तथा सरकारले पास उपलब्ध गराएकाहरु कम्पनीको बिक्री केन्द्रमा पुगेर चुल्हो खरिद गरिरहेका छन् । “ लकडाउनभन्दा पहिलेको जस्तो चुल्होको चासो राख्ने त कम छन्, तर पास भएकाहरु भने अहिले पनि खरिद गर्न आइरहेका छन्”, नायब महाप्रबन्धक खनालले भन्नुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि विद्युतीय चुल्हो बिक्रीका लागि सरकारले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले विद्युत् महसुलसमेत छुट भएको अवस्थामा नागरिकले एलपी ग्यासको विकल्पमा उक्त चुल्हो नै प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले इन्डक्सनबाट खाना पकाउने ग्राहकलाई १५० युनिटसम्म विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिनुभएको छ । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई १५० युनिटसम्म २० प्रतिशत महसुल छुट दिन निर्देशन दिइएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री पुनले इन्डक्सनमा छुट दिँदा ग्यासको विस्थापनमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । “ग्यास बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । विद्युत् हाम्रो आफ्नै उत्पादन हो”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “यसो गर्दा ग्यास किन्न बाहिरिने पैसा देशभित्रै बस्छ, व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ ।”
विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन पनि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा आउने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गर्नुभयो । मुलुक नै लकडाउन भएपछि विद्युत् खपतमा कमी आएको छ । बिहान बेलुकाको समयमा विद्युत्को माग सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटसम्म रहेकामा हाल सो घटेर ९४५ मेगावाटमा सीमित भएको छ ।
बुधबार बसेको नोभेल कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि इन्डक्सन चुल्हो आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको थियो ।